राप्रपाको आज देशभर जिल्ला अधिवेशन – YesKathmandu.com
मङ्गलबार २५, माघ २०७३
काठमाडौँ, २५ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि आज देशभर जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ । आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्न सो अधिवेशन गरिएको हो ।
देशका ७५ जिल्लामा एकै दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त अधिवेशनमा प्रत्येक जिल्लाबाट नौजनाको अनुपातमा देशभरबाट ६७५ केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोट गरिने पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिP ।
सो अधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित ६५ प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन गरिने छ भने बाँकी ३५ प्रतिशत सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनीत गरिने छ । एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाबाट २५ सदस्य तथा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ६५ सदस्य जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा छनोट हुने छन् ।
महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पार्टीले करिब २० लाख साधारण सदस्यता वितरण गरेको बताइएको छ ।
स्थानीय धुम्बाराहीमा भइरहेको पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट गर्ने प्रयास हुने बताOG5 .
दुई सयलाई तीन महिनामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता
विद्यार्थी र शिक्षक वर्षामा सङ्कलित पानी पिउदैं
अपहरित सुरेश केडिया भारतको विहारबाट सकुशल मुक्त
मधेसी उम्मेद्धार पहाडी मन जित्दै
पूर्व सभासद् शान्ता चौधरीको घरमा लुटपाट
नयाँ पार्टी दर्ता गर्न ओली र दाहाल आज निर्वाचन आयोग जाने
उत्तरी गोरखामा पहिरोमा पुरिएर चार जनाको मृत्यु, छ जना गम्भिर घाइते
यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आक्रामक योजना
भारतीय विदेशमन्त्रीको एक आग्रहमा राजपा चुनावमा भाग लिन तयार
माओवादीका ८ मन्त्रीले बुझाए सामुहिक राजीनामा
भारत मधेस कार्डपछि थारु कार्ड खेल्दै
प्रधानमन्त्री ओली लाई बधाई दिन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी नेपाल आउने
उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र सचिव केदार अधिकारीबीच भनाभन,कर्मचारी रमिते….
एमालेमा उम्मेदवारको मापदण्ड र सिफारिस गर्ने मिति तय
काठमाडौंमा विहानै बम विस्फोट
दुःखद खबर ,कवि एंव पत्रकार नकुल सिलवालको आत्महत्या ?
डोल्पामा एमालेलाई ठूलो सफलता